Madasha Xisbiyada Qaran oo Weerartay Itoobiya Una Digtay AMISOM – Goobjoog News
Madasha Xisbiyada Qaran ee dalka oo ay ku mideysan yihiin kuwa ugu weyn dhanka siyaasadda dhowr ayaa maanta waxaa ay soo saareen baaq ay u dirayaan Ra’iisalwasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyaga oo ugu baaqan in loo baahan yahay in dowladdiisa ay joojiso faragelinta ay ku hayso gudaha Soomaaliya.
Madasha waxaa ay qoraalka ku sheegtay in ciidamo Itoobiyaan ay dhowaan Gedo ku xireen saraakiil la magaacay ee Baladxaawo iyo Doolow, waxaa kale oo Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland laga hor istaagay inuu booqdo deegaan doorashadiisa iyo arrimo kale oo ay Adis Ababa ku lug leedahay.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa sheegay in muhiim tahay in dowladda Itoobiya ciidamadooda faraha kala baxaan waxa ka socda Galmudug oo aaney u faragelin sidii Koonfur galbeed ka dhacday sanadkii hore.
Sidoo kale Madasha ayaa walaac ka muujisay doowarashada dhowaan lagu wado in ay ka dhacdo deegaannada Galmudud, waxaana ay xuseen in dowladda federaalka ah ay faragelin toos ah iyo mid dadbanba ay ku hayso doorashada.
Ugu dambeyntii waxaa ay madasha uga digtay AMISOM iney isticmaasho wax aan ku jirin heshiiska, kana baxsan awoodaheeda.